တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစ္စရေးနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ronen Gilor အားလက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
အောကျတိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၈
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစ္စရေးနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ronen Gilor အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ – ၃၁
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစ္စရေးနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့် H.E. Mr. Ronen Gilor အား ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမ ဆောင်၌လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစ္စရေးနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ သံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာ၊ အစ္စရေးနှစ်နိုင်ငံစလုံး ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပြီးနောက် အစ္စရေးနိုင်ငံသို့ ပထမဆုံးနိုင်ငံတော်အဆင့်ချစ်ကြည်ရေး ခရီးကို ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနု သွားရောက်ခဲ့ခြင်းအပါအ၀င် နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ အပြန်အလှန်ချစ်ကြည်ရေး ခရီး လည်ပတ်ခဲ့မှုအခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံနှင့်တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာဖြင့် ကဏ္ဍများစွာတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအခြေအနေများ၊ ရှိရင်းစွဲချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို ပိုမိုတိုးမြှင့်နိုင်မည့်အခြေအနေများ၊ ပညာရေးကဏ္ဍ၊ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနှင့်ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြည်သူများမှ ရွေးချယ်သည့် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် လျှောက်လှမ်းနေမှုအခြေအနေများနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်သည့်အတွေ့အကြုံများဖလှယ်ရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာအမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစ္စရေးနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးအပ်ပြီး တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
နပွေညျတျော၊ အောကျတိုဘာ – ၃၁
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အစ်စရေးနိုငျငံသံအမတျကွီးအဖွဈ ခနျ့အပျခွငျးခံရသညျ့ H.E. Mr. Ronen Gilor အား ယနေ့ မှနျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာဧညျ့ခနျးမ ဆောငျ၌လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အစ်စရေးနိုငျငံသံအမတျကွီးနှငျ့အတူ သံရုံးမှ တာဝနျရှိသူမြားတကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ မွနျမာ၊ အစ်စရေးနှဈနိုငျငံစလုံး ၁၉၄၈ ခုနှဈတှငျ လှတျလပျရေးရရှိခဲ့ပွီးနောကျ အစ်စရေးနိုငျငံသို့ ပထမဆုံးနိုငျငံတျောအဆငျ့ခဈြကွညျရေး ခရီးကို ၁၉၅၅ ခုနှဈတှငျ မွနျမာနိုငျငံ ဝနျကွီးခြုပျ ဦးနု သှားရောကျခဲ့ခွငျးအပါအဝငျ နှဈနိုငျငံခေါငျးဆောငျမြား အပွနျအလှနျခဈြကွညျရေး ခရီး လညျပတျခဲ့မှုအခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံနှငျ့တပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးစှာဖွငျ့ ကဏ်ဍမြားစှာတှငျ ကယျြပွနျ့စှာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျခဲ့မှုအခွအေနမြေား၊ ရှိရငျးစှဲခဈြကွညျရငျးနှီးမှုကို ပိုမိုတိုးမွှငျ့နိုငျမညျ့အခွအေနမြေား၊ ပညာရေးကဏ်ဍ၊ စိုကျပြိုးရေးကဏ်ဍနှငျ့ကနျြးမာရေး ကဏ်ဍမြားတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျမညျ့အခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံတှငျပွညျသူမြားမှ ရှေးခယျြသညျ့ ပါတီစုံ ဒီမိုကရစေီလမျးကွောငျးပျေါတှငျ လြှောကျလှမျးနမှေုအခွအေနမြေားနှငျ့ လူ့အခှငျ့အရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားနှငျ့ ပတျသကျသညျ့အတှအေ့ကွုံမြားဖလှယျရေး ဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားအား ရငျးနှီး ပှငျ့လငျးစှာအမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အစ်စရေးနိုငျငံ သံအမတျကွီးအား အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးပေးအပျပွီး တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့အတူ စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။
အချိန်ကာလအလျောက် အသက်အရွယ်များကြီးရင့်လာသော်လည်း မိမိတို့၏ အမျိုးသားရေးနှင့် မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်များ ထာဝစဉ်ရှင်သန်လျက်ရှိရန် အထူးလိုအပ်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဆောင်ရွက်လျက် ရှိသဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်နေရုံသာမက ပြည်သူများအချင်းချင်း ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရန်လိုအပ်
Coronavirus Disease 2019(Covid-19) ရောဂါ ကာကှယျ၊ ထိနျးခြုပျ၊ ကုသရေးအတှကျ တပျမတျော(ကွညျး၊ ရေ၊ လေ) အရာရှိ၊ စဈသညျမြားနှငျ့ အရပျသား အစားခနျ့ဝနျထမျးမြားက လုပျခလစာငှမြေားမှ စတေနာထကျသနျစှာ ထပျမံထညျ့ဝငျလှူဒါနျး(ရုပျသံသတငျး)
နိုဝငျဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၉ Admin 0